Magaalo hor leh oo horay loogu asteeyey inay doorashadu ka dhacdo oo laga wareejin karo & walaac ka yimid Beesha caalamka | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Magaalo hor leh oo horay loogu asteeyey inay doorashadu ka dhacdo oo...
Magaalo hor leh oo horay loogu asteeyey inay doorashadu ka dhacdo oo laga wareejin karo & walaac ka yimid Beesha caalamka
(Muqdisho) 06 Luulyo 2021 – Wararkii ugu danbeeyay doorashada Soomaaliya.
Beesha caalamka ayaa ka walaacsan inay doorasho ka dhici karto magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose, oo ka mid ah magaalooyinka loo asteeyey deegaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in xubno ka tirsan beesha caalamka ay qabaan inay halis amni oo xooggan ka iman karto haddii doorasho halkaas lagu qabto, ayada oo ay suurta-gal tahay inay soo weeraraan maleeshiyada Al-Shabaab.
“Haddii la go’aamiyo inaan Baraawe lagu qaban doorasho waxay albaabada u furi kartaa maamullada kale ee ku doodaya in deegaan doorashada lagu soo koobo hal magaalo. Haddii lagu qabanayana waxay u baahan tahay qarash badan iyo ciidan dheeri ah, marka waa laba ka darran mid dooro,” ayuu yiri sarkaal ku dhow beesha caalamka.
Previous articleTigreega oo ku faanay inay ka adkaadeen dalal ay SOMALIA ku jirto (Laba arrimood oo warkooda ka muuqda)
Next articleGOOGOOSKA: Italy vs Spain 1-1 (4-2) (Italy oo final-ka gaartey)